Esi gbanwee mkpebi ihuenyo site na iji xrandr | Site na Linux
Gbanwee mkpebi na distros dabere na GNOME o KDE dị mfe. Maka ndị ji ya Openbox na nkwekọrịta, okwu a dị ntakịrị karịa. Ọtụtụ oge, nke a na - eweta nkọwa ogologo nke otu esi agbanwe faịlụ nhazi nke X sava: xorg.conf, emi odude ke wdg / X11.
Agbanyeghị na enweghị ihe ọ bụla na usoro a, xorg.conf ewepụla ma bụrụ ihe na-atụ ụjọ maka ọtụtụ ndị ọrụ.
Jiri xrandr ọ bụ karịa ngwa ngwa y mfe. Na mgbakwunye, o nwere ọtụtụ eserese eserese ma enwere ike iji ya ihe ndị ọzọ dị mkpa na-adọrọ mmasị dị ukwuu, dịka nhazi nke nyocha abụọ, wdg.
1 Etu esi eji xrandr
2 Mezi dpi
3 Nyocha abụọ
4 Hazi xrandr ka buut na mbido
5 Ngwa eji ese ihe
Etu esi eji xrandr
Nke mbụ, depụta mkpebi dị iche iche maka ileba anya gị:
Ọ bụrụ na edeghị mkpebi ị na-achọ, ọ nwere ike ịbụ n'ihi na ileba anya gị anaghị akwado ya ma ọ bụ na ịchọrọ ịwụnye ọkwọ ụgbọ ala ka mma (ati, Intel, ma ọ bụ nvidia).
Mgbe ahụ, tọọ mkpebi ịchọrọ iji (gbanwee "1400 × 1050" na mkpebi ịchọrọ):
Dpi dị iche na mkpebi nke ihuenyo gị (nke akọwapụtara dị ka pikselụ x inch) ma na-emetụta ihe ịchọ mma nke windo ahụ, nha otu, nsụgharị nke fon, wdg.
Na otutu monitors, xrandr ga-edozi dpi na akpaghị aka. Ọ bụrụ na ọ bụghị, ma ọ bụ ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbanwe nhazi a, ịnwere ike iji aka ya dee ya:
Ọ bụrụ na ọ daa, ịnwere ike ịkọwa dpi na ~ / .Xdefaults
Emeghere m nchịkọta akụkọ ma tinye ihe na-esonụ na faịlụ ahụ:
A ga-etinye dpi a na windo niile ị mepere. I nwekwara ike pụọ iji hụ nsonaazụ mgbanwe a (ọ dịghị mkpa ịmalitegharịa usoro ahụ).
Ọ bụrụ na 96 abụghị dpi kwesịrị gị, ịnwere ike ịnwale 72 ma ọ bụ 135.
Enwekwara ike iji xrandr iji hazie monitors abụọ. Iji mee nke a, ị ga-ejirịrị nhọrọ - nhọrọ-nke-na-ekpe-nke nhọrọ.
Lee otu ihe atụ, iji kaadi nvidia:
Nke mbu, dee ndi nlekota oru site na iji xrandr.
Nsonaazụ ga-abụ ihe dịka ndị a:
Ihuenyo 0: kacha nta 320 x 200, ugbu a 1920 x 1200, kachasị 4096 x 4096
DVI-I-1 ejikọrọ 1920x1200 + 0 + 0 (izanormal hapụrụ aka nri ziri ezi x axis y axis) 520mm x 320mm
DVI-I-2 ejikọrọ 1920x1200 + 0 + 0 (aka ekpe ziri ezi nọchiri anya x axis na axis) 520mm x 320mm
TV-1 kwụsịrị (nkịtị hapụrụ aka nri x x axis y axis)
Jiri xrandr hazie monitors ahụ. Gbanwee aha "DVI-I-1" na "DVI-I-2" na aha ndi nlekota gi. Nwekwara ike ịchọ ịhazigharị mkpebi ahụ ma gbanwee “–akụkụ nke” ka ọ bụrụ “–ihe-nke”.
xrandr -auto-mmepụta DVI-I-2 -mode 1920x1200 -akụkụ-nke DVI-I-1
Ọ nwere otu mmetụta dịka:
xrandr -auto-mmepụta DVI-I-1 -mode 1920x1200 -nke ziri ezi nke DVI-I-2
Iji tọọ onye nlekota nke mbụ, jiri nhọrọ –nke mbu:
xrandr --auto - mmepụta DVI-I-1 --mode 1920x1200 --pril - nke ọma-nke DVI-I-2
Hazi xrandr ka buut na mbido
Usoro a dịgasị iche dabere na desktọọpụ gburugburu ebe obibi ị na-eji (gnome, kde, xfce).
Na oghere, tinye iwu xrandr na ~ / .config / openbox / autostart.sh.
Na fluxbox, mee otu ọrụ mana na faịlụ ~ / .fluxbox / mmalite
Dabere na ọnọdụ desktọọpụ ị na-eji, ịnwere ike ịgbakwunye xrandr na ~ / .xinit
Ngwa eji ese ihe
Enwere ezigbo eserese eserese maka xrandr. N'ime ndị a kacha mara amara, anyị nwere ike ịkọ lxrandr, grandr, krandr na arandr.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Faịlụ FileLet jiri » Esi gbanwee mkpebi ihuenyo site na iji xrandr
Ezi post, oge gara aga, edere m otu isiokwu banyere otu esi ahazi ihu ngebichi n'okpuru oghe oghe ma mepụta akwụkwọ ahụaja na-enweghị usoro ọ bụla na ntanetị: njikọ
Akpọ oku_92839 dijo
Ka anyi lee ma m ghotara ... chee na enweghi m mkpebi m choro na nleba anya, ya na ihe obula nke eserese a bu ihe m gha acho ime.
Na, ebee ka m ga-etinye faịlụ ahụ (ma ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume na eserese eserese) dịka ọmụmaatụ na Gnome na KDE?.
Ana m ekele gị nke ukwuu, achọrọ m ihe ngwọta maka nsogbu mkpebi ahụ ogologo oge, mana onye ọ bụla tinyere ya na faịlụ Xorg, conf, mana faịlụ ahụ dị na ụdị ndị ọhụrụ nke distros anaghịzi eji ya.
Zaghachi na Invitadess_92839
Ọ bụrụ na mkpebi ị chọrọ apụtaghị na interface nke GNOME ma ọ bụ KDE na-eweta iji gbanwee mkpebi ihuenyo, mgbe ahụ ịnwere ike ịnwale usoro a, ee. N'ọnọdụ ọ bụla, ọ ga-abụ na ọ bụrụ na mkpebi ihuenyo ị na-achọ apụtaghị, ọ bụ n'ihi na onye nyocha gị anaghị akwado ya. O doro anya na enwere ndị ọzọ na iwu a mana ha anaghị adịkarị ụkọ. Mmakọ! Paul.
Mba, na nke m nyocha m nwere mkpebi kacha dị na 1366 × 768, na Windows ọ na - arụ ọrụ nke ọma na onye ọkwọ ụgbọ ala Intel, nyocha ahụ bụ emachines (ikekwe ọ bụ n'ihi akara ahụ). GNU / Linux kachasị mkpebi bụ 800 × 600 ma ọ bụ 1024 × 600, dabere na distro ahụ, mana site na ebe ahụ ọ gbagooghị. M gbalịrị iji distros niile, mana naanị na otu ka mkpebi ziri ezi pụtara na-ejighị iwu xrandr na cvt nyochaa m, na Ubuntu 10.10, mana enweghị m ike iji nsonaazụ eserese, Amaghị m ihe kpatara ya, ọbụnadị imelite ...
Ya mere aga m anwale ihe ị tinyere ebe a, m ga-agwa gị ma ọ rụọ ọrụ ...
PS: ọ bụ ihe ijuanya, n'ihi na nyocha nke nwanne m nwoke nke HP, nke nwere mkpebi ala nke 1600 × 900 Enweghị m nsogbu na mkpebi ahụ, enwere m echiche na ọ nwere ike ịbụ n'ihi na anaghị akwado nyocha m ma ọ bụ na amataghị ya kernel ngwaike ude usoro.
Ọ rụụrụ m ọrụ na ndozi nhazi mkpebi nke mere na LinuxMint na nke m 12. Maka ebumnuche ụfọdụ mgbe ịmalitere sistemụ ọ naghị amata mkpebi nke ileba anya m. Mana m edozila ya site na ịwụnye 'grandr', mepụta akara ngosi na desktọọpụ na m ga-eji mmalite ọ bụla nke Desktọpụ. Ejikwara m 'lxrandr' mana m na-emegharị nke ọma na 'grandr'. N'ihe na-akwadoro 'grandr'. Ekele 🙂
M na-eji edemede na netbook m nke na-eji xrandr, ọ na-enye m ohere iji mkpebi enweghị nkwado ma ọ bụ na ọ dịghị ihe ọzọ edepụtara na ndabara, ebe ọ bụ na nke kachasị bụ 1024 × 600 yana site na edemede m nwere ike ịtọ ya na 1280 × 750
Ọ bụghị naanị na-arụ ọrụ maka gnome, m na-eji ya na XFCE
Enweghị m ike icheta isi mmalite ebe m hụrụ ya, kama naanị google ya; D.
Zaghachi Max Jonathan
M na-eji Xrandr bugharia desktọọpụ na netbook naanị mgbe m kwesịrị, n'ihi na ọ na-egbu oge nwayọ nwayọ. Mgbe m gụchara ya, m ga-egbu ya ma bidogharịa X.
Enwere ike mmadụ ịgwa m ihe kpatara ya?
Zaghachi na Invitades_92839
Ndewo enyi m nwere nsogbu na-eso ya na 4 nke centos
Ihe omuma m banyere Linux abughi ihe efu ma mgbe m gbaliri ịbanye na onyonyo eserese, enwere m ozi ntinye na-akwadoghi.
Agbalịrị m ịgbanwe nhazi ahụ site na iji usoro ahụ ị kọwara ebe a ma enwere m ike imeghe ngosi (efu)
Biko gwa m otu m ga - esi mee iji megharia nhazi ileba anya ebe obu na iji ihe ntinye aha ya adighi aru oru
Daalụ maka enyemaka ị nwere ike inye m
Ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na itinye iwu niile ị tinyere na ozi njehie zuru oke.
Neutron Poncho dijo
A na-eji iwu a eme ihe mgbe ị nọrịị n'ime usoro eserese (ihe nkesa X). N'okwu gị, sistemụ eserese anaghị amalite, nke mbụ ị ga-eme usoro eserese nke Xorg na-amalite.
Zaghachi Poncho Neutron
Amaara m na ọ dịla ogologo oge post ahụ mana mmadụ nwere ike ịgwa m otu esi etinye faịlụ na mgbanwe xubuntu ga-abụ ezigbo enyemaka ekele
Daalụ maka post ị nyeere m aka ugbu a, ihuenyo m dị oke mma!
Ndewo, nkuzi gị bara ezigbo uru, naanị m ka m ga-emecha, ọ ga-amasị m ka ịkọwara m nke ọma etu m ga - esi bido nnọkọ ahụ, etinyela m xubuntu. Cheers
Impeccable daalụ nke ukwuu!
9 Linux na-akpa ọchị ma na-abaghị uru + na-enye iwu